अठार थान खुकुरी सहित ५ लाख रुपैयाँ बारा प्रहरीबाट बरामत
जीतलाल श्रेष्ठ/बारा । अठार थान खुकुरी सहितका झण्डै ५ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बारा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं, पोखरा जाने यात्रु बहाक बसमा चेकजाच गर्ने गर्ने क्रममा खुकुरी सहित सुपारी, साडी, कुर्ता सरवाल लगायतका विभिन्न कस्मेटिक समान नियन्त्रणमा लिएको निजगढ प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बिना कागजातका ती सबै सामान राजश्व आन्तरिक […]
नेपालको अर्थतन्त्र खतरामा नरहेको स्पष्ट : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र खतरामा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधबार काठमाडौमा आयोजित आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को १९औं साधारणसभामा खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले काम भइरहेको र नतिजा आउनका लागि केही समय लाग्ने समेत बताउनुभयो । नेपालको इतिहासमा लगातार दुईपटक ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि भएको र अहिले […]
काठमाडौंका सडकमा आज बिजोर नम्बरका सवारीसाधन
काठमाडौं । बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आजदेखि सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको छ । विहानैदेखि सडकमा विजोर नम्बरका सवारी समय र सीमा तोकिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सुरक्षा महाशाखाको बैठकले बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सो प्रणाली लागू हुने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र लागू हुने व्यवस्थाअन्तर्गत राति १० […]
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक०को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विदेशी पाहुनाहरु नेपाल आउने क्रम जारी छ । मंगलबार बिहान भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ल्योन्पो छिरिङ वाङचुक काठमाडौं आएका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गरे । परराष्ट्र […]
सल्यानमा घर भत्किँदा एकै परिवारका पाँचको मृत्यु
सल्यान । सल्यानमा घर भत्किँदा एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । सल्यानको बागचौर नगरपालिका ४ सेतीगुराँस भन्ने स्थानमा अबिरल वर्षाले घरको दलिन र भित्ता भत्किँदा रामसिंह कामीका ६ जनाको परिवारमध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेहरुमा रामसिंह, उनकी श्रीमती रामकला, छोरी गंगा र प्रमिला तथा छोरा रुपलाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ […]
डेढ सय भारतीय कमाण्डो काठमाडौंमा
काठमाडौं – भारतीय सेनाका डेढ सयभन्दा बढी कमाण्डो फौज गुपचुप रुपमा काठमाडौं आएका छन् । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा भारतबाटै अत्याधुनिक हातहतियार सहितको कमान्डो फार्स काठमाडौं आइपुगको हो । बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्डबाट पनि केही कमान्डो काठमाडौं आइसकेको […]
मुख्य अपराधमा प्रहरी नै विवादमा !
काठमाडाैं । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा मुख्य जिम्मेवार प्रहरी पछिल्ला प्रमुख घटनाहरुमा आफैँ विवादमा तानिएको छ । निसान खड्का अपहरण, डा. गोविन्द केसीको जुुम्ला अनशन र कञ्चनपुरमा किशोरी हत्याका घटना यसैका उदाहरण हुन् । भक्तपुरका बालक निसान खड्काको अपहरणमा सलग्न भनिएका दुई युवाको फेक ईन्काउन्टर विवादमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तानियो । गृहन्त्री रामबहादुृर थापाले […]
सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चले उल्ट्यायो नजिर
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा कसुरदारले अनुसन्धानका क्रममा अभियोग स्वीकार गरेपछि पुनः होइन भनेकै आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । अछामको जनालीकोटमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा कारागार चलान भएका अभियुक्त डिल्ली स्वाँरसहित चारजनाले दायर गरेको पुनरावेदन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको […]
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको दादागिरीः यी किशोरीलाई पनि प्रहरीले चरम यातना दिएको खुलासा
कञ्चनपुर – कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले स्थानीय १७ वर्षीया किशोरीलाई पनि पक्राउ गरेर चरम मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको खुलेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिमा छापिएको छ । ज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा १२ कक्षामा अध्ययनरत हेमन्ती भट्टलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मलाको बलात्कार […]
मन्त्रालयको संख्या कति ? प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संसदलाई सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको विषयमा संसदलाई जानकारी गराएका छन्। आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विपक्षी दलले सरकारलाई तानाशाहीको संज्ञा दिँदै गलत प्रचार […]